वडाध्यक्षले चढ्न थाले साइकल : साइकलको प्रवर्द्धन गर्दै महानगर ! | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
वडाध्यक्षले चढ्न थाले साइकल : साइकलको प्रवर्द्धन गर्दै महानगर !
२०७७ श्रावण ११, आईतवार ०८:३५ गते
भरतपुर । गत शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाका वडा १० का अध्यक्ष अरूण पीडित भण्डारी प्याजी कलरको साइकलमा भेटिए । शुक्रबार भएकाले दिनको ३ बजेको समयमा उनी कार्यालय सकेर घर जाने तरखरमा थिए । वडा कार्यालयनजिक पार्किङ गरेको साइकल निकाले, हेल्मेट लगाए र आफ्नो घर बालमिन्दरतर्फ लागे । उनलाई साइकलमा देखेपछि सेवाग्राही र कर्मचारीहरु पनि अचम्म मान्दै थिए । उनी भन्दै थिए, ‘महानगरकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न साइकल चढेको हुँ ।’ उनले यति भनेपछि साइकल रोकेर उनीसँग थप कुराकानी गरियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको गत असार १० गते सम्पन्न छैटौँ नगरसभाले फरक निर्णय गरेको छ । जुन निर्णयको कार्यान्वयन अहिले केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले थालेका छन् । भरतपुर महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा अध्यक्ष भण्डारीले ‘एक सपना साइकल र सफा भरतपुर’ भन्ने नारा महानगरको रहेकाले त्यसै अभियानमा सरिक भएको बताए । हरेक शुक्रबार साइकल प्रयोग अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
बढ्दो वातावरण प्रदूषण, इन्धन खपत, शारीरिक व्यायामका लागि साइकल उपयोगी भएकाले यसको प्रयोगमा जोड दिइएको उनले बताए । ‘टाढाटाढा जान परेमा गाह्रो होला । तर, घरदेखि वडा कार्यालय र आसपासका क्षेत्रमा डुल्नका लागि साइकल निकै उपयोगी छ, वडाअध्यक्ष भण्डारीले भने । बिहान बेलुकाको समय र नजिकको दूरीमा यात्राका लागि साइकल उत्तम साधन भएकोले यसको प्रवद्र्धनका लागि महानगरले अभियान नै लिएर अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वच्छताका लागि साइकल अभियान थालिएको बताइन् । चितवन साइकलको शहर भए पनि पछिल्लो समय साइकल चढ्नेहरुको संख्या कम भएको, सडकमा पनि साइकल यात्रीलाई अन्य सवारीले हेप्ने गरेको भन्दै उपमेयर ठकुरीले साइकल चढ्ने संस्कारको विकास गर्न नगरसभाबाटै निर्णय गरिएको बताइन् । ‘महँगा गाडी चढेर जिमखाना जाने चलन छ, तर साइकल चढेर स्वस्थ हुन लाज मान्नेहरु पनि छन्, उनले भनिन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले नगरका विभिन्न स्थानमा साइकल लेन बनाइरहेको छ । साइकल यात्रीहरुले सडकमा असुरक्षा भएको गुनासो गरेपछि र वातावरणीय प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी साइकल चलाउने अभियानलाई अघि बढाएको महानगरले जनाएको छ ।
डिआर साइकल स्टोर्स नारायणगढका सञ्चालक धर्म सापकोटाले साइकल अभियानको सुरूवात सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिए । साइकल व्यसायी संघ चितवन नवलपुरका निवर्तमान अध्यक्ष तथा चितवन साइकल राइडर्स क्लबका सचिवसमेत रहेका सापकोटाले दुई चार दिनको रहर वा हल्लामात्र नभई यस अभियानले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । साइकल लेनसहितको स्मार्ट सिटी बनाउन सकेमा महानगरको ठूलो उपलब्धि हुने उनले बताए ।
#कार्यालयबाट साइकल चढेर घर जाँदै वडा १० का अध्यक्ष अरूण पीडित भण्डारी ।